Effects Of Chocolate On Dental Health - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
မနကျဖွနျဟာ Valentine’s day ဆိုတော့ Vday အမှီ ခြောကလကျနဲ့သှားကနျြးမာရေးအကွောငျးလေး ပေါကျပေါကျဖောကျပါရစေ ?
သှားနှငျ့ခံတှငျးကနျြးမာရေးဟာ အရေးကွီးတဲ့အခနျးကဏ်ဍတဈခုဖွဈတာမို့ ဆုံးအောငျဖတျပေးကွပါ..လို့
ဘာလဲကှာ ငါတို့ခြောကလကျမကြှေးရတော့ဘူးလား ဆိုတဲ့ အတှဲတှဆေူဆဲခငျြလညျး ပွီးအောငျဖတျပွီးမှ လာဆူဆဲကွပါ..လို့?
ခြောကလကျဟာ Systemically အရ ကနျြးမာရေးအတှကျ ကောငျးပမေယျ့လို့ အခြိုဓာတျပါတာကွောငျ့မို့လို့ သှားကိုထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။
ခြိုပွီးစေးကပျတဲ့အစားအစာတှဟောပုံမှနျရိုးရိုးအစားအစာတှထေကျ သှားမကျြနှာပွငျပျေါမှာ အခြိနျအကွာကွီးရှိနနေိုငျတာမို့လို့ သှားပိုးစားခွငျးကို ပိုမိုအားပေးပါတယျ။
ခြောကလကျဟာလညျး ခြိုပွီးစေးကပျတဲ့အစားအစာတဈခုဖွဈလို့ ခြောကလကျ လကျဆောငျရကွတဲ့ ညီမလေးတှေ မမတှအေနနေဲ့ ခြောကလကျအမြားကွီးလကျဆောငျရတိုငျး တနငျ့တပိုးမစားပဲနဲ့ ဉာဏျနဲ့ဆငျခွငျစားသောကျကွပါလို့ အကွံပေးခငျြတာပါ။?
ခြောကလကျအပါအဝငျ ခြိုပွီးစေးကပျတဲ့အစားအစာတှကေို ဘယျလိုဉာဏျရှိရှိစားသောကျကွမလဲဆိုရငျ…
အားရအောငျ၊ အီဆိမျ့အောငျ၊ ဝပွဲနအေောငျစားပဈပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သှားပိုးစားရောဂါဖွဈစတေဲ့ factor တှထေဲမှာ အခြိနျ ဆိုတာ ပါပါတယျ။
ဆိုလိုတာက သှားပျေါမှာ ခြိုပွီးစေးကပျတဲ့အစားအစာတှေ အခြိနျအကွာကွီးတညျရှိနခွေငျးဟာ သှားပိုးစားရောဂါကိုဖွဈပျေါစဖေို့ အားပေးနတောမို့လို့ ခြောကလကျစားမယျဆိုရငျ နညျးနညျးနဲ့ ခဏခဏစားနမေယျ့အစား တဈခါတညျး အဝအပွဲစားပွီး သှားတိုကျပေးကွပါ..လို့
(ဒီစာရေးသူ Legendary FA လေးကိုလညျး ခြောကလကျလေးလာကြှေးကွပါလို့…?)
မနက်ဖြန်ဟာ Valentine’s day ဆိုတော့ Vday အမှီ ချောကလက်နဲ့သွားကျန်းမာရေးအကြောင်းလေး ပေါက်ပေါက်ဖောက်ပါရစေ ?
သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးဟာ အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တာမို့ ဆုံးအောင်ဖတ်ပေးကြပါ..လို့
ဘာလဲကွာ ငါတို့ချောကလက်မကျွေးရတော့ဘူးလား ဆိုတဲ့ အတွဲတွေဆူဆဲချင်လည်း ပြီးအောင်ဖတ်ပြီးမှ လာဆူဆဲကြပါ..လို့?
ချောကလက်ဟာ Systemically အရ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းပေမယ့်လို့ အချိုဓာတ်ပါတာကြောင့်မို့လို့ သွားကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ချိုပြီးစေးကပ်တဲ့အစားအစာတွေဟာပုံမှန်ရိုးရိုးအစားအစာတွေထက် သွားမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ အချိန်အကြာကြီးရှိနေနိုင်တာမို့လို့ သွားပိုးစားခြင်းကို ပိုမိုအားပေးပါတယ်။
ချောကလက်ဟာလည်း ချိုပြီးစေးကပ်တဲ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ်လို့ ချောကလက် လက်ဆောင်ရကြတဲ့ ညီမလေးတွေ မမတွေအနေနဲ့ ချောကလက်အများကြီးလက်ဆောင်ရတိုင်း တနင့်တပိုးမစားပဲနဲ့ ဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်စားသောက်ကြပါလို့ အကြံပေးချင်တာပါ။?
ချောကလက်အပါအဝင် ချိုပြီးစေးကပ်တဲ့အစားအစာတွေကို ဘယ်လိုဉာဏ်ရှိရှိစားသောက်ကြမလဲဆိုရင်…
အားရအောင်၊ အီဆိမ့်အောင်၊ ဝပြဲနေအောင်စားပစ်ပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သွားပိုးစားရောဂါဖြစ်စေတဲ့ factor တွေထဲမှာ အချိန် ဆိုတာ ပါပါတယ်။
ဆိုလိုတာက သွားပေါ်မှာ ချိုပြီးစေးကပ်တဲ့အစားအစာတွေ အချိန်အကြာကြီးတည်ရှိနေခြင်းဟာ သွားပိုးစားရောဂါကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့ အားပေးနေတာမို့လို့ ချောကလက်စားမယ်ဆိုရင် နည်းနည်းနဲ့ ခဏခဏစားနေမယ့်အစား တစ်ခါတည်း အဝအပြဲစားပြီး သွားတိုက်ပေးကြပါ..လို့
(ဒီစာရေးသူ Legendary FA လေးကိုလည်း ချောကလက်လေးလာကျွေးကြပါလို့…?)